टंक सर मैले सहयोग गरेको रकम किन भुईकटरलाई दिनु भएन ? (मार्मिक भिडियो हेर्नुहोस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > टंक सर मैले सहयोग गरेको रकम किन भुईकटरलाई दिनु भएन ? (मार्मिक भिडियो हेर्नुहोस्)
झापा । हङकङबाट मैले भुईकटहरेको घरको अवस्था ज्यादै नाजुक देखेर सहयोग गरे । तर, भुईकटहरे आर्थिक समितिको हिसाबमा आफ्नो नाम नदेखेपछि धरान घर भई हङकङ बस्दै आएका दिपेन्द्र फोपाङ लिम्बूले घर आएको बेला झापाका दमक ३ स्थित भुईकटहरको घरमै पुगेर आफूले गरेको सहयोगका बारेमा प्रष्ट पार्न गायक बुढाथोकीलाई आव्हान गरेका छन् ।
विदेशमा खुन पसिना बनाएर पठाएको रकम अपादर्शी हुँदा दुःख लाग्छ । मैले अशोक दर्जी र भुईकटहरेका लागि २०÷२० हजार सहयोग गरेको थिए । मैले गरेको सहयोग जस्तो धेरैले गर्नु भएको छ । त्यो दुरुप्रयोग भयो भने आगामी दिनमा सहयोग गर्ने बाटो बन्द हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शी बनाउन उनले सुझाव दिए ।
बिदेश गएका र्बुद्धिमान कुँवरकाे हात र खुट्टा काटिएकापछि रुदै काठमाण्डौ, एअरपोर्टमा सबैको रुवाबासी – भिडियोमा हेरेर शेयर गराैं